Tantaran'ny serasera.org - Serasera Malagasy
You are here: home> Momba ny takelaka> Tantaran'ny serasera...
1999: http://lisitra.serasera.org : Takelaka misy ny hafatra tahiry izay nitranga hatramin'izay niandohan'ny serasera. Ity takelaka ity no tena fototry ny serasera.org hatramin'ny voalohany. Ato no misy ny fidirana handray hafatra sy handefa hafatra ho an'ny Malagasy mpikambana ao amin'ny serasera.org. Adiresy tokana serasera@yahoogroupes.fr dia voarain'ny mpikambana an'arivony ny hafatra. Ny mpikambana ihany no afaka mandefa hafatra amin'io adiresy tokana io.
2001: http://tononkira.serasera.org : Takelaka nametrahana ireo tononkira malagasy izay nampidirin'ny mpitsidika ny takelaka. Misy ihany koa ny sary sy ny mombamomba ireo mpanakanto izay fantatra.
2002: http://namana.serasera.org : Takelaka nosokafana mba hifandraisana sy hihaonan'ny samy Malagasy. Ny mpikambana (namana) dia afaka mandefa hafatra manokana ho an'ny namana izay tiany handray izany. Manana boatin-kafatra manokana misy ireo hafatra nalefan'ny namana ho azy. Afaka mametraka ny sariny sy ny mombamomba azy ho hitan'ny namana hafa.
2003: http://forum.serasera.org : Fametrahana dinidinika momba ny lohahevitra isan-karazany. Adihevitra mikasika ireo zava-mitranga ara-tsosialy, ara-politika, ara-koltoraly, ara-pinoana, ara-pitiavana sy ny sisa.
2003: http://chat.serasera.org : Takelaka ahafahana miresaka mivantana amin'ireo namana hafa.
2003: http://radiovazogasy.com : Takelaka ahafahana mihaino hira malagasy. Ny mpihaino no mandahatra ny hira.
2004: http://vetso.serasera.org : Takelaka misy ireo tononkalo sy vetsovetso nosoratan'ireo namana zary lasa poeta malagasy. Misy tononkalo 800 mahery amin'izao fotoana anoratana izao.
2005: http://takelaka.org : Takelaka mitahiry ireo takelaka malagasy rehetra (nosokafana ny 2005)
2005: http://ohabolana.org : Takelaka hanangonana ohabolana (Nosokafana ny 2005)
2006: http://blaogy.com : Takelaka hametrahanao ny blaogy ho anao (Nosokafana ny 2006)
2006: http://klipgasy.org : Toerana hahitana ireo hira malagasy an-tsary nalaina tetsy sy teroa.
2007: http://bizna.serasera.org : Takelaka hametrahana ireo antso, dokam-barotra sy filazana samihafa.
2007: http://baiboly.katolika.org : Takelaka karakarain'ny serasera.org miaraka amin'ny katolika.org ahitana ny baiboly amin'ny teny malagasy.
2008: http://infogasy.net : Takelaky ny Informatisiana Malagasy izay nisokatra ny 2005 fa noraisin'ny serasera kosa ny 2008.
2009: http://avatar.serasera.org : Takelaka hametrahana ny sarintava izay endrika entin'ny mpikambana tsirairay amin'ny takelaka rehetra.
2009: http://antsary.com : Takelaka hametrahan'ny mpikambana ny tahirintsariny.
Tsy vitan'olon-tokana ny fitantanana ireo rehetra ireo. Eo dia eo aloha ireo mpikambana isan-karazany izay mampiaina ny serasera.org. Raha tsy teo ny mpikambana dia zary trano haolo ihany ny serasera.org. Fa eo indrindra indrindra ihany koa ireo namana isan-karazany izay manohana amin'ny lafiny maro na ara-kevitra izany na amin'ny asa na ihany koa ara-bola.
Taotrano tsy efan'ny irery ny serasera.org. Matoa nahatratra izay taona maromaro izay izy dia vokatry ny fiaraha-misalahy eo amin'ny samy Malagasy. Isaorana avokoa ireo rehetra nifarimbona amin'ny haharetan'ny serasera.org sy amin'ny mbola haharetany hanomezana fahafaham-po ny Malagasy tia serasera rehetra. Ankasitrahana manokana ireo miara-mitoto na dia tsy fantatry ny olona aza. Hivaly 100 sy 1000 heny anie ny vokatry ny hasasaranareo.
Voasokatra tao anatin'ny 0.0879 segondra